Contextual Targeting: Kuvaka Brand Kudzivirirwa Mune Iyo Cookie-shoma Era | Martech Zone
Brand chengetedzo ndiyo mhedzisiro inofanirwa kune vashambadziri kuenda kumberi mune ino reza mamiriro ezvematongerwo enyika nehupfumi uye zvinogona kuita mutsauko wekugara mubhizinesi.
Mabhiza izvozvi ave kudhonza kushambadza nguva dzose nekuti anoonekwa mune zvisina kukodzera mamiriro, ne 99% yevanoshambadzira vane hanya nezve kwavo kushambadza kunoonekwa munzvimbo dzakachengeteka.
Pane chikonzero chakanaka chekufunganya
Zvidzidzo zvakaratidza kushambadza kunoonekwa padhuze nezvisina kunaka kunoguma ne 2.8 nguva kudzikiswa kwechinangwa chevatengi kushamwaridzana nemhando idzi. Pamusoro pezvo, zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevatengi, avo vakamboratidzira chinangwa chekutenga chakakwirira chechiratidzo, vaive nemikana mishoma yekutenga iyo brand mushure mekuratidzwa kushambadziro yekambani imwechete ichionekwa nezvisina kukodzera zvemukati; pamwe nekuona kwemutengi kwechiratidzo icho kwakaderera kanomwe.
Contextual Targeting: Rutsva Nyowani yeBrand-yakachengeteka Njere
Nhau dzakanaka ndedzekuti, kutarisisa kwemamiriro ezvinhu kunovimbisa kuchengetedzeka kwechiratidzo nekuongorora zvemukati uye kusabatanidza kuiswa pamatanho uye zvemukati zvinoonekwa zvisina kuchengetedzeka. Injini inoshanda inonongedza zvirinani inokwanisa kugadzirisa ese emhando yezvinyorwa zviripo pane peji, kupa chokwadi che360-degree nhungamiro kune zvinoreva peji re semantic.
Zvishandiso zvakanaka zvinobvumidza nzira dzakaomesesa kupfuura kuenzanirana kwemazwi akakosha, uye bvumidza vashambadzi kusarudza nharaunda dzavanoda kusanganisira, uye zvakakosha, idzo dzavanoda kusarudzira, senge zvirimo vachishandisa kutaura kweruvengo, hyper partisanship, hyper politicalism, rusaruraganda, huturu, stereotyping, nezvimwe.
Semuenzaniso, mhinduro dzakadai se4D dzinogonesa kuburitsa otomatiki mhando dzemasaini aya kuburikidza nekubatana kwakasarudzika nevanobatsirana navo seFactmata, uye mamwe maratidziro emamiriro anogona kuwedzerwa kusimudzira kuchengetedzeka kwenzvimbo inowoneka kushambadza.
Yako Ad Ad Nharaunda Brand Yakachengeteka?
Chishandiso chakavimbika chakanangana nekutarisisa chinogona kuongorora zvemukati uye nekukuzivisa iwe kune nuanced brand chengetedzo kutyorwa kwakadai se:
Hyper zvematongerwo enyika kana kusarura kwezvematongerwo enyika
Chirevo Chekutarisa Kupfuura Chinyorwa
Vamwe vakafambira mberi kutarisisa mamiriro zvishandiso kunyange zvine kugona kwevhidhiyo kugona, uko kwavanogona kuongorora furemu yega yega yezvinyorwa zvevhidhiyo, kuona marogo kana zvigadzirwa, vanoziva mifananidzo yakachengeteka, ine runyorwa rwekuzivisa zvese izvi, kupa nzvimbo yakakwana yekushambadzira mukati nekukomberedza chidimbu chemavhidhiyo. Izvi zvinosanganisira, zvakakosha, furemu yega yega mukati mevhidhiyo, uye kwete iro zita chete, thumbnail, uye ma tag. Rudzi irworwo rwekuongorora rwunoshandiswawo pane zvemodhiyo zvemukati nemifananidzo, kuona kuti saiti yacho yese yakachengeteka.
Semuenzaniso, chishandiso chakanangana nemamiriro ezvinhu chinogona kuongorora vhidhiyo ine mifananidzo yechiratidzo chedoro, kuona kuburikidza nemumhanzi & vhidhiyo kuti inzvimbo yakachengeteka, uye zivisa vashambadzi kuti ndiyo nzira yakanaka yekutengesa zvirimo pamusoro pehwahwa. kuoneka kune akakodzera tarisiro vateereri.
Zvishandiso zvekare zvinogona kungoongorora mazita emavhidhiyo kana odhiyo, uye usanyatsoongorora mifananidzo, zvichireva kuti kushambadza kunogona kupedzisira kwave munzvimbo isina kukodzera. Semuenzaniso, zita revhidhiyo rinogona kunge risina mhosva uye richionekwa ngozi nechishandiso chekare chechinyorwa, senge Maitiro ekugadzira doro rakakura zvisinei zvirimo muvhidhiyo pachayo zvinogona kunge zvisina kukodzera zvakanyanya, senge vhidhiyo yevechidiki vachiri kuyaruka vachigadzira doro - ikozvino kushambadzira kwechiratidzo munzvimbo iyoyo chinhu chisina mushambadzi anogona kuwana parizvino.
Zvisinei mhinduro senge 4D vakavaka indasitiri-yekutanga yemusika musika iyo inogonesa sarudza tekinoroji vadyidzani kuti vavharise maalgorithms avo ehumwe seimwe yekuwedzera nongedzo yekunongedza, uye vanobatana navo seFactmata vanopa mabrand kudzivirira kubva kune rusaruro, zvisina kukodzera, kana zvine chepfu zvemukati uye zvinogona kushandiswa kuona brand brand uye kukodzera kunoitiswa nemazvo.
Tsvaga zvimwe nezve kutarisana nemamiriro ezvinhu mune yedu nyowani chena bepa:
Kwechokwadi Kunanga: Kudzokera Kumangwana ReKushambadzira
Silverbullet irudzi rutsva rwe data-smart kushambadzira masevhisi, akagadzirirwa kupa masimba kumabhizinesi kuti aite kuburikidza neakasarudzika yakasanganiswa ye data services, ruzivo-ruzivo rwezviri mukati, uye chirongwa. Iko kusanganisa kwedu kwehungwaru hwekunyepedzera uye ruzivo rwevanhu rwunopa ruzivo rwekupa simba kushambadza kwako kushambadza kune ramangwana.
Tags: brand chengetedzoclickbaitcontextual adskutarisisa mamirirohyper partisanshipHyperism yezvematongerwo enyikamachine learningsirivheristereotyping
Zvikonzero zvishanu izvo Mushanyi Akasvika Pane Peji Rako